Ukuluhlaza okuluhlaza okwesibhakabhaka, isiqholo sabakhohlisi abazelweyo Amadoda aQinisekileyo
Iklabhu yamaGentlemen | | yokuPhila, Iifumba
Ukujonga ngamehlo, uncumo olwaziyo, ukungqubana "okungenanjongo"; oovimba basebenza xa bethatha inxaxheba kumdlalo wokulukuhla. Le miba yile nto u-Antonio Banderas afuna ukuyifaka "Ukulukuhla okuluhlaza okwesibhakabhaka", ivumba layo elitsha nelikhethekileyo lobudoda Eau de yangasese eligqibezela umgca wayo Iziqholo zokuSusa.
Sisiqhumiso esijolise kubaphulaphuli besilisa abancinci; indoda ethi kwimicimbi yokulukuhlwa ihlaziyeke ngakumbi, iyazenzekela kwaye iyadlala.
Ukuyila Ulukozo oluBlue emadodeni ibonakalisa ingqumbo yevumba elimnandi: yeyangoku, yahlukile kwaye intle. Ibhotile idibanisa amacala agudileyo kunye nesiseko esikroliweyo kwi-mosaic, intsebenzo entle phakathi kweemilo ezikhanyayo kunye nokubonakaliswa.
Livumba lamanzi elenziwe ngamanqaku e-bergamot, i-cassis, i-mint, i-melon, i-cardamom, i-nutmeg, isivumelwano samanzi, i-apple freshness, isivumelwano se-cappuccino, i-amber kunye nehlathi elihle. Ekubunjweni kwayo, umbono wokutsha kwendalo iphela ubonakalisiwe ngamanqaku eetoni kunye nasekuhleni, ngokudibeneyo neziqhamo zeziqhamo, iziqholo ezingaqhelekanga kunye nezinto ezintle ezintle.
Ulukozo oluBlue Uveza inkangeleko yobuntu buka-Antonio Banderas, othi ngeli vumba aveze izixhobo zakhe zokuhenda.
Njengobuntu bomdlali weqonga, Ulukozo oluBlue Yenzelwe amadoda angacwangciswanga, akhululekileyo kwaye azenzekelayo abonwabela umzuzu wobomi ngomzuzu.
Ulukozo oluBlue Udibanisa ivumba elisekuhleni nelitsha kunye noburharha. Amafutha abonisa isitshixo sobuqhetseba bendalo, ekuthiwa umdlalo wokulukuhla uchazwe ngokungacwangciswanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iifumba » Ukuluhlaza okuluhlaza okwesibhakabhaka, isiqholo sabakhohlisi abazelweyo
Ukuba ngentwana nje ivumba elihlala lihleli, kwaye ukuba linuka kamnandi kakhulu, ukuba le cologne ingayilungela iminyaka eyi-19
Jova imvelaphi yegama lokuqala sitsho
nge 16 ngathi yoo! Ndisandula ukuyithenga! 🙂
kabini omar sitsho
Ndifuna ukuyila yeyona nto ibalaseleyo endizamile kule minyaka idlulileyo
Phendula u-omar kabini
Uyalazi igama lengoma abayifaka kwintengiso kukuba ibamba umdla wam, ungalithumela igama umnyama_zorc@hotmail.com?
pz xa vdd
Jonga kwi-vdd, intle intengiso yakho
kwaye ndiyithande kakhulu ingoma kwaye nangoku
yazi ukuba ibizwa njani
Ngaba umntu unokundixelela ukuba ingoma ibizwa ntoni
Molo, mhlawumbi uyazi igama lengoma ebonakala kwintengiso yeziqholo? Enkosi
Molo ... ingoma yellama sway nguDean Martin
, kwaye ndiyathemba ukuba bazakundixelela ukuba isiqholo esi sinuka kamnandi okanye hayi ukuba siyithenge!
Enkosi ciao ...
lithini igama lokurhweba?
ndicela undiphendule kule msn
Uxolo ndiyaxolisa zeduzir ezte unyaka omtsha xD
I-kanzion ze llama ishukunyiswa ngu-dean martin
kodwa hey grax bae
Ukuba iklabhu yamadoda, kutheni ungafundi ukubhala ngokuchanekileyo?
Kunzima ukuqonda omnye komnye.